Fiiri gvSIG 1.10 - Geofumadas
Oktoobar, 2010 Geospatial - GIS, GvSIG, aragti ugu horeysay
Ka dib maalmo yar ka dib dhaafa gvSIG 1.9, sabar la'aan cayayaanka of version iyo jeegag kaleMaanta waxaan u soo laabtay arinta gvSIG. Anigoon taaban software-kan mudo dheer ayaa ii ahayd mid waxtar leh, maadaama furitaanka nuucaan cusub oo aan isbarbar dhigayo sawirkii aan ka qabtay munaasabadaas waa mid aad u xiiso badan.
Nolosha gabyaaga tiknoolajiyadda ma fududa, dib u eegista softiweerka waajibaadka, daruuriga ama xiisaha dartiis wuxuu u baahan yahay samir; Isticmaalka kaftanka leh softiweeriyada lahaanshaha ee kafaala qaadaya cinwaanka ayaa la aqbalay, laakiin fahamka dhiirrigeliyeyaasha hindisaha isha furan ayaa iga sii qiimo badan. Sidoo kale ka dambeynta kumbuyuutarka ayaa nagu fasahaadin kara xorriyadda farshaxanka su'aalaha ee xilligan, laga bilaabo sarbeeb faneed illaa la mid ahaanshaha saddexda fikradood ee ay laba Yuhuuddu leeyihiin inta badan markay si caadi ah ugu doodaan.
Waa inaan si daacad ah u qiraa in horumarka aan ku arko noocani uu iga tagay aniga oo qanacsan. Ku socodsiinta nooca 1.6 ee Java engine, oo ku habboon Vista / Windows 7 iyo isla mashruucii ugu dambeeyay as horumarka waa hubaal in la ogaan karo. Laga soo bilaabo bilowgii, isdhexgalka ayaa u muuqda mid dhakhso badan, nadiif ah; shaqo weyn oo ku saabsan isticmaalka xitaa haddii ay tahay Java oo aanan u guurin Linux. Xaqiiqdii 15-kan daqiiqo ee aan ku qanacsanahay waxaa jira kumanaan saacadood oo loo rogay koodh, maahan oo kaliya barnaamijyada booska uurjiifka, laakiin bulsho dhammeystiran oo ku jirta baaritaanka, si ay uga jawaabto liisaska, si kor loogu qaado shirarka iyo ugu dambeyntii in ay qaadaan qalabkan iyada oo mid ka mid ah waddooyinka ugu adkaysiga badan iyo nidaamyada aan arkay.
Dhamaadka cutubkan, iyadoo leh gvSIG waxa aan dhamaanteen rajeynayno waa aalad waari karta waqti ka dib, waa wax soo saar aan ugu tala galnay xarafka ñ, oo aan ugu deeqi karno degmo kasta anaga oo dammaanad ka qaadeyna inaysan dhiman doonin markay lacagtu dhammaato. hadda wuu adkeystay. Gaar ahaan dagaalka istiraatiijiga ah ee ay qaadi karto ESRI, AutoDesk, Intergraph iyo Bentley marka ay tahay tartan muuqata (in badan oo horayba u jiray) ama marka la eego guud ahaantii aan ku aragnay bilowgii (taas oo kharashka ku baxday) sababtoo ah waxay tixgelisay software bilaash ah oo tartiib tartiib tartiib ah oo aan la hubin in ay sii socoto.
Laakiin haye, aniga oo cag badh ku leh Holland, ma haysto waqti badan oo iga haray inaan noqdo jacayl, hiyi-kacdayduna had iyo jeer ma noqon doonto mid wax soo saar leh. Aan aragno waxa dareenkeyga kuqabtay safafka hore.
Ka soo horjeedda waqtiyadii hore, howsha waxaan kaliya ku qasbanahay inaan doorto mashiinka dalwaddii Java iyo luqadda, taasoo noqonaysa sidan. Inta soo hartay, tallaabo isdaba joog ah.
Waxaa lagu dhejiyay:
«C: Barnaamijka FilesgvSIG_1.10_RC1bingvSIG.exe»
Uma arko is-waafajin qaababkii hore. Laakiin markaan arkay tan, xitaa anigoo og inay tahay RC, ma haysto sabab aan ku sii hayo noocyadii hore.
Sidoo kale mid ka mid ah icon siman ee desktop ah oo leh gvSIG figurine doonaa kaliya wareersan.
Taas awgeed, waa inaad u tagtaa faylasha faylalka barnaamijka oo aad ka tirtirtaa halkaas. Had iyo jeer waxaa jira galka la magacaabay Uninstaller kaas oo ka kooban nidaam joogto ah oo meesha looga saarayo rakibidda. Waxaan kugula talinayaa inaad halkan ka sameyso, maaddaama guddiga xakamaynta uusan noqon karin habka ugu dhaqsaha badan ama aysan suurtagal ahayn in la arko dhammaan noocyada la rakibay haddii aan ku fiicnayn diiwaanka.
Tilmaamo xiiso leh.
Ma haysto waqti badan oo hadda aan ku sameeyo dib-u-eegis dhammaystiran. Laakiin waxaad ka arki kartaa astaamaha cusub ee nooca ku jira aagga dheecaanka; hadda waxaan diiradda saari doonaa saddex warka oo aan ka helay xiiso.
Khariidada goobta. Tani waxay horey u soo bandhigtay horumar weyn, iyada oo la dhexgalo waxyaabo kala duwan ee muuqaalka iyo yaraanta cayayaanka. Xitaa waxaan u arkaa inay ka xoog badan tahay sida uDig iyo QGis ay u sameeyaan maalmo ama ay lahaayeen.
Waa suurtagal in lala falgalo iyada oo lagu dhaweynayo badhanka bidix ee bidix. Wixii sanduuqa lagu xusho ayaa lagu soo bandhigi doonaa shaashadda. Kadib badhanka saxda ah, waxaad ku jiidi kartaa sanduuqa, adoo ilaalinaya cabirka, sidoo kale haddii aad gujiso wuxuu dhigayaa daaqada isla cabirka ah isla meeshaas.
Iyada oo gawaarida badhanka ay taageerto zoom, inkasta oo aanan helin hab lagu celiyo xadka asalka ah Hubaal inay jiraan wax ku jira buug-gacmeedka, oo ah halka laga bilaabayo.
Isku xirnaanta lakabyada khariidada goobtan waxaa lagu sameeyaa "View> configure locator".
Macluumaad degdeg ah. Tani waa nooc caadi ah Qalabka, kaas oo soo bandhigaya meelaha la xushay, marka tilmaanta la saarayo lakabka. Kuu ogolaanayaa inaad doorato lakabka, iyo beeraha, oo ay ku jiraan xogta la xisaabiyay (aan la kaydin) sida aagga, wareega iyo dhererka.
Anigu ma aanan arkin sida loo bedelo guud ahaan pink laakiin xaqiiqdii waad awoodi kartaa, waxayna umuuqataa xoogaa gaabis ah marka hore haddii aad doorato dhowr goobood. Ma lihi dhismooyin isku dhafan oo midabkaas leh laakiin ma jecli in ay i dhibto Chiapanecos 🙂 sidoo kale waxay u badan tahay in AcerAspireOne Ma aha qalabka ugu degdegsan ee lagu sameeyo GIS.
Miiska Jadwalka. Wixii ugu soojiidashada badnaa ee aan abid arko. Wuxuu kala bar yaqaana cayayaanka inay ku sheegaan liisaska qaybinta, laakiin markaan arkay waxay iga dhigtay mid qanacsan. Waxay ka kooban tahay shaqo la mid ah tan ay joqoraafi ahaan u isticmaasho tan Soo hel, waxay sare u qaadeysaa jadwalka astaamaha shayga, oo leh badhanno loo aado tan xigta iyo xulashooyinka si weynaanta ama xulashada shayga ay u dhaqdhaqaaqdo. Halkan khariidada goobta waxay noqoneysaa mid soo jiidasho leh.
Aad uga taxaddar badhannada hoose, maadaama aad tirtiri karto diiwaanada, aad nuqul ka qaadan karto hal shay oo aad u keydin karto. Waxay sidoo kale lagama maarmaan noqon laheyd in la arko haddii daaqadani aysan noqon karin dherer go'an, maxaa yeelay waa qashin meel marka xog yar ay jirto; Maan isku dayin laakiin haddii aad leedahay wax ka badan waxa ku habboon waxaan u malaynayaa in ay bar ka mid ah laab. Waxaan xushay degmo aan tijaabiyo oo aan rakibo, markaa daaqadda badh baa la sudhay a null.point.error.
Horeba mar dambe ayaan isku dayi doonaa qoraalo kale oo keenaya nuqulkan.
Marka la soo koobo, waxay umuuqataa nooc si cadaalad ah u xoogan, oo leh isbadalo badan oo ay bulshada codsatay. Waxaan sidoo kale arkaa inay jirto tijaabo weyn, labada cayayaanka ee aan arkay waxaan horey ugu maqlay liisaska qeybinta waana hubaal inay sabab u tahay dulqaadkeyga yar ee howlaha socda asalka.
Waxaa jira arrimo xooggan oo leh arrintan
rsion, badanaa wanaag. Horeba maalmaha ku jira qaaradda yurub Waxay umuuqdaan kuwa dhawaqoodu xooganyahay, laakiin waa inaan waxbadan galino, badanaa mashruucyada iskaashiga dibada. Yurub istiraatiijiyado kale ayaa shaqeynaya, laakiin dhinacan balliga waxay u noqon kartaa abuur qaali ah oo qarxin kara walxaha qarxa. Wadamo badan oo Latin Amerika ah waxaa ka jira mashaariic iskaashi oo ka shaqeeya lacagaha Midowga Yurub ama lacagaha laba geesoodka ah ee ka yimaada Jarmalka, Holland, Finland, Spain, si loo xuso kuwa ugu xoogan. Ka sokow, waxaa jira mashaariic iskaashi oo si toos ah loogu maareeyo golayaasha, bulshooyinka ismaamula ama golayaasha magaalada ee ay iska kaashadaan shirkadaha reer Yurub, NGO-yada ama degmooyin leh san wanaagsan. Inta badan mashaariicdan waxaa ku jira qaybo iskutallaab ah sida deegaanka, hidaha, dayacanka, isbeddelka cimilada, bogagga daahfurnaanta, iwm. oo ay ku jiraan sheyga desktop iyo webka.
Ma xuma haddii aad wax badan la wadaagi kartid bartaas, maaddaama ka-faa'iideystayaasha ay aqbali doonaan softiweerka la bixiyey oo ay sii hayn doonaan illaa inta buugaggan iyo tababarku ka harsan yihiin. Kheyraadka sidoo kale waa la sii kala dheereyn karaa haddii kharashka rukhsadda la yareeyo, muddada dheerna, joogtaynta raasamaalka aadanaha ee la tababaray waxay saameyn ku yeelan doontaa faafinta gvSIG, oo ah tallaabo ay tahay inay la wareegaan akadeemiyadda iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ee bixiya adeegyo ku saabsan qorshaynta isticmaalka dhulka. Haddii aad saameyn ku yeelan karto siyaasadaha socdaalka si aad u hesho barnaamij bilaash ah ... aad ayey u fiican tahay.
Waxaa jiray qorshe xiiso leh oo la yiraahdo gvSIG iyo iskaashiga, laga yaabee inaad ku adkeysan karto inaad dib uhesho. Maalgeli nidaaminta khibradaha iyo faafintu waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee ururku u muuqdo inuu ku sameynayo habka saxda ah. Taasi way fiicantahay, waana inay ku adkeysato joogtaynta ka timaada dacwada wada jirka ah tan iyo jawaabta dhinacyada saddexaad waxay xoojin doontaa horumarka horey loo sameeyay.
Baahnayn in la dhaho, taageerada qaabab dhowaan CAD ayaa lagu daray, taasi waxay noqon doontaa hub ay software-ka lahaanshuhu hayn doono Laakiin waxay mudan tahay in la taageero wiilasha GIS la qaadi karo in lagu daro nuqulkan dhowaan maxaa yeelay waxay ku gaabiyeen 1.1. Waxaan sugi doonaa shirka sanadkaan, hubaal halkaas waxaan ku ogaan doonaa warar dheeraad ah.
Halkan waxaad ka soo qaadan kartaa gvSIG 1.10
Post Previous" Hore PCS miyuu u dhimanayaa dadka isticmaala CAD / GIS?
Post Next Amsterdam oo dheeraad ahNext »
3 Jawaab ah "Fiiri gvSIG 1.10"
Runtii, laga bilaabo CartoLab waxaan iskaashi la sameyneynaa mashruuc biyo ah oo ay Hay'ada Ingeniería Sin Fronteras ku leedahay Honduras. Waxaan leenahay degel halkaas oo codsiga gvSIG Fonsagua loogu sharaxo xoogaa ka fiican kaasoo aan rajeynayno inaan sii wadno shaqada mustaqbalka.
Waad ku mahadsantahay tabarucaada Francisco, xiisaha ay u leedahay inaad ogaato inaad shaqo ka qabatay koonfurta Honduras. Aynu aragno haddii maalin maalmaha ka mid ah aan la oggolaanay kooxda oo aan ku yeelanay cappuccino magaalada Tegucigalpa.
Xaqiiqdii, khaladaadka ayaa igu dhacay aniga markii aan tirtiray diiwaanka la doortay.
Waxaan salaamayaa meel fog.
Anigu waxaan ku raacsanahay falanqayntaada, gvSIG waa barnaamij lagu hormarinayo xawliga wanaagsan iyo sida bulshada loo tixgeliyo mid ka mid ah lugaha waarta ee mashruuca.
Dhab ahaantii Jadwalka Guud, waa jaangooyo bulshada, oo ay soo saareen saaxiibadayasha CartoLab.
Ciladda ku siisa adiga waxaan u maleyneynaa inay la xiriirto tirtiridda markaad samaysay doorasho ama aad haysato wax la doortay. Waxaan aaminsanahay in qaababka horumarinta kordhinta la xalliyo mar walba haddii aad ku dhicin inaad noo soo diri karto sharaxaad ku saabsan bugta iyo faylka gvSIG faylka, iyada oo loo marayo bogtracker osor, liiska boostada, ama boosteejeyaalkayga.